Maqaallada Alexander García-Tobar Martech Zone |
Maqaallada by Alexander García-Tobar
Faafida ayaa kordhisay baahida loo qabo in waax kasta oo ka tirsan hay'ad ay fiiro gaar ah u yeelato amniga internetka. Taasi macno ayay samaynaysaa, sax? Markasta oo aan u isticmaalno tignoolajiyadayada habraacyadayada iyo shaqa-maalmeedkeena, waa inta aan aad ugu nugulnahay jebinta. Laakin qaadashada dhaqamada amniga internetka ee ka wanaagsan waa in laga bilaabo kooxo suuqgeyn oo aqoon fiican u leh. Nabadgelyada internetka ayaa caadi ahaan walaac u ahayd hoggaamiyeyaasha Teknolojiyadda Macluumaadka (IT), Saraakiisha Amniga Macluumaadka (CISO) iyo Saraakiisha Sare ee Teknolojiyadda (CTO)